ဆရာမြတ်ထွဋ်ခေါင်: ကျွန်ုပ်ကိုယ်တွေ့အိမ်မက်တွင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တွေ့အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာနှင့် အိမ်မက်တွင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ
(၁၉၉၆)ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ မနက်(၅)နာရီတိတိ၊ အပြင်မှာ နှင်းတွေကျနေဆဲ။
ကျွန်ုပ်သည်ညက အိမ်မက်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားနေမိသည်။ အိမ်မက်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်သည် ပြည်မြို့ရှိ ရွှေဆံတော် ဘုရား၏အောက်ဘက်တွင်ရှိသော လိုဏ်ဂူထဲရောက်ရှိနေပါသည်။ ထိုလိုဏ်ဂူအတွင်းတွင် ယခုခေတ် စတိတ်ရှိုးများတွင် အသုံးပြုသော မီးလုံးများနှင့်တူသော မြူခိုးများဖြင့် လွှမ်းခြုံနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် လိုဏ်ဂူအတွင်းဘက်မှ လူသံလိုလိုကြားမိ၍ အထဲသို့တစ်လှမ်းချင်းဝင်သွားမိရာ ဂူ၏ ညာဘက်ခြမ်း တွင် သံဇကာလိုလို၊ သစ်သားလိုလို ဇကာကွက်ဖြင့် ပိတ်ထားသော အခန်းတွင်းမှ ၀တ်ဖြူ စင်ကြယ်နှင့် ခေါင်းပေါင်းအဖြူပေါင်းထားသော အဘိုးကြီးတစ်ဦးသည် တရားထိုင်နေရာမှ ကျွန်ုပ်အားလက်ဖြင့် ''လာဦး၊ လာဦး"ဟု လက်ယက်ခေါ်နေသည်။
ကျွန်ုပ်ရင်ထဲတွင် ဒိတ်ကနဲ တစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း ငါ့ကိုခေါ်နေတာတော့ ကျိန်းသေ တယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီအဘိုးကြီးနဲ့ ငါနဲ့ကသိတာမဟုတ်ဘူး။ အန္တရာယ်ပေးမယ့်သူလား၊ အို…. မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ၊ သူ့မျက်နှာက ရန်ပြုမယ့်ပုံစံမျိုးမှ မဟုတ်တာ….။
ကျွန်ုပ်သည် မိမိ၏ ကြောက်စိတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ မောင်းထုတ်၍ ရဲဆေးတင်ကာ အဘိုးကြီးရှိရာ အခန်းတွင်းသို့ ၀င်သွားလိုက်မိပါသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့မှ ကျွန်ုပ်၏ကြောက်စိတ်များသည် ပိုပို၍ ကင်းစင်သွားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၀တ်ဖြူစင်ကြယ် အဘိုးအို၏မျက်နှာသည် သေချာစွာအနီးကပ် ကြည့်လိုက်တော့မှ လွန်စွာကြည်ညိုစရာကောင်းနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှ ''အဘ ကျွန်တော့်ကို ခေါ်နေတာလား'' ဟု ဂါရ၀ပြုရင်း နှုတ်ဆက်စကားကို ဆိုလိုက်ပါသည်။
''အေး…. မင်းကို အဘ စောင့်နေတာ ကြာပြီ ၊ ရှေ့ကိုတိုး ၊ ရှေ့ကိုတိုး"
ကျွန်ုပ်သည် အဘဟု သူ့ကိုယ်သူပြောနေသော အဘိုးကြီး၏ ရှေ့ကို အနည်းငယ်တိုးလိုက်ရာ-
ကျွန်ုပ်လည်း အမိန့်ပေးခံရသည့် ရဲဘော်တစ်ဦးပမာ အဘိုးကြီး၏ ရှေ့တွင် ညာလက်ဝါးကို ဖြန့်လိုက် မိသည်။
အဘိုးကြီးသည် ၄င်း၏လက်တွင်းမှ အရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသော အလုံးတစ်လုံး (ဓါတ်လုံးသဏ္ဍာန်)အလုံး တစ်လုံးကို ကျွန်ုပ်၏ ညာဘက်လက်တွင်းသို့ ထည့်လိုက်ရာ ၊
ကျွန်ုပ်မှာ ကျောတွေရင်တွေ စိမ့်သွားကာ ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်းထသွားပါသည်။
နှုတ်မှလည်းဘုရားတလိုက်မိပါသည်။ အဘိုးကြီးထည့်ပေးလိုက်သည့် ဓါတ်လုံးသည် ကျွန်ုပ်၏ ညာလက်အတွင်း လက်ဝါးပေါ်တွင် အရည်ပျော်သလိုဖြစ်ကာ အသားထဲစိမ့်ဝင်သွားပါသည်။
''သား မင်းဘ၀ အောင်ပြီလို့သာမှတ်လို်က်ပေတော့''ဟု ပြောပြီး ရုတ်တရက် ကျွန်ုပ်၏ရှေ့မှ အဘိုးကြီး ပျောက်သွားပါသည်။ ဖျတ်ကနဲအိမ်မက်မှလန့်နိုးလာတော့ မနက်(၄)နာရီခွဲနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်။ အိမ်မက်အတွင်းမှ အဖြစ်အပျက်တို့သည် ဂမ္ဘီရဆန်ဆန်ဖြစ်နေသည်။ ပြည်ရွှေဆံတော်ဘုရားကို ကျွန်ုပ် ရောက်ဖူးပါသည်။ ယခု အိမ်မက်,မက်သည့် အချိန်နှင့်ပြန်တွက်ကြည့်ပါက နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော်လောက်ရှိနေပါ ပြီ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ကျွန်ုပ်မှာ ဗေဒင်ဆရာမဟုတ်ပါ။ ကရေတေးနည်းပြဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ အောင်ဆန်းကွင်းမှာ အချိန်ပိုင်းနည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူနေရင်းမှ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော တပ်မ(၅၅) ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ (Y.W.C.A) (S.K.I)အသင်း အစရှိတဲ့ အဖွဲ့တွေမှာ နည်းစနစ်မှူးတာဝန်တွေယူနေရတဲ့အချိန် နောက်ဆုံး တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ကရာတေးဆပ်ကော်မတီမှာ ဒု-ဥက္ကဌဘ၀နဲ့ (၃)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် ပြီး၊ အနားယူတော့မှ ဗေဒင်လောကထဲရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ စွဲလမ်းပြီး အိမ်မက်, မက်တယ်လို့ ပြောရအောင်လည်း ဒီလောက်အချိန်တွေကြာစရာမလိုပါဘူး။
ကျွန်ုပ်သည် ဒီအိမ်မက်က ထူးခြားတာနဲ့ မနက်(၆)နာရီ လောက်ရောက်တော့ တောင်ဥက္ကလာပရှိ ဟေမ၀န်ဈေးဘက်သို့ ထွက်လာရင်းစိတ်ထဲက ဆရာ့ကိုမေးကြည့်ရမယ်ပေါ့။ အဲဒီဈေးထဲမှာက ကျွန်ုပ် ကိုယ်တိုင် ဖွင့်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှိတယ်လေ၊ ကျွန်ုပ်၏ ဆရာက မနက်တိုင်း ကျွန်ုပ်၏ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေကြဆိုင်ကို ရောက်တော့ ဆိုင်တံခါးမဖွင့်ရသေးဘူး၊ ဆိုင်ရှေ့မှာ ရဟန်းတစ်ပါး ရပ်စောင့်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။
ကျွန်ုပ်မှ ''အရှင်ဘုရား…… ဘာကိုအလိုရှိပါသလဲ''ဟု လက်အုပ်ချီ၍ နှုတ်ဆက်လိုက်ရာ …..။
ဘုန်းကြီးက ''ဒကာကြီးက ဗေဒင်ဆရာမြတ်ထွဋ်ဆိုတာလား''….။
''အေး … ဒကာကြီးကို ဘုန်းကြီးစောင့်နေတာ ကြာပြီ။ ဒကာကြီးနဲ့ ဗေဒင်ကိစ္စ ဆွေးနွေးချင်လို့''
ကျွန်ုပ်က ''မှန်လှပါဘုရား၊ တပည့်တော် စားပွဲခုံတွေခင်း လိုက်ပါဦးမယ် ဘုရား''
''အေး … အေး၊ လုပ်လုပ် ဒကာကြီးလုပ်သင့်တာကို အရင်လုပ်လိုက်ပါဦး၊ ပြီးတော့ ဖြည်းဖြည်းဆွေးနွေး တာပေါ့''
ကျွန်ုပ်လည်း ဘုန်းကြီးထိုင်ရန်အတွက် စားပွဲခုံတစ်လုံးကို အရင်ခင်းလိုက်ပြီး စိတ်ထဲမှာလည်း ညက အိမ်မက်ထဲမှ ၀တ်ဖြူစင်ကြယ်အဘိုးကြီးနှင့် ယခုမနက်ဆိုင်သို့ ကြွလာသောရဟန်းအကြောင်းကို ဆက်စပ်၍ တွေးကြည့်နေမိသည်။
ထိုင်ခုံများခင်းပြီးချိန်တွင် ကျွန်ုပ်မှ ''အရှင်ဘုရား ဘာကို သိချင်တာလဲ ဘုရား''
''ဘုန်းကြီးက ဗေဒင်မေးလို့ လာတာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒကာကြီးရဲ့ ဗေဒင်အမည်မြတ်ထွဋ်တိုတာ ဘယ်သူ ရွေးပေးတဲ့ နာမည်လည်းဆိုတာ သိချင်လို့ပါ''
ကျွန်ုပ်မှာ ''တပည့်တော်ရဲ့မိခင် ပေးထားတဲ့နာမည်ပါ၊ ဗေဒင်နည်းစနစ်နဲ့ဆိုတော့ ဒီနာမည်ကိုပေးလို့ မရဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ တပည့်တော်မွေးနေ့က စနေသားပါ။ ဒါပေမဲ့ မိဘတွေမှဲ့ခေါ်ထားခဲ့တဲ့ အမည်ကို မပယ်ချင်လို့ပါ။
''ဒီလိုရှိတယ် ဒကာကြီး ၊ ဘုန်းကြီးကတော့ရခိုင်ဆိုတော့ ရခိုင်ရိုးရာအမည်ပေးနည်းစနစ်ကို နည်းနည်း ရှင်းပြဦးမယ်၊ ဒကာကြီးရဲ့ မွေးနံစနေသားကို ခဏဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါဦး၊ မြတ်ထွဋ်ဆိုတဲ့အမည်က ပုဂ္ဂလ ပညတ်အားတော့ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ တိုင်ပညာခန်းနဲ့ဆိုရင် အမည်ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတယ်။
၀-(ထွဋ်) ၀- (တြိရန်း)
၂- (ခေါင်) ၂ - (ပဉ္စပွတ်)
(၅)-(မြတ်ထွဋ်) (၅) –(မူလ)
အဲဒါကို ဘုန်းကြီးကနောက်တစ်ခုကို စေတနာနဲ့ ထပ်ပြီးဖြေပေးလိုက်မယ်၊ မူလကို ပဉ္စပွတ်အုပ်ထားတဲ့ ''မြတ်ထွဋ်ခေါင်'' ဆိုတဲ့ အမည်ပဲ ….
အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာကျမ်းရင်းမှာလည်း ပဉ္စပွတ်ဂြိုလ်ဟာ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုရှိတယ်လို့ ဆိုထားတယ်၊ အလယ်မှာရှိတဲ့ (ထွဋ်)ဆိုတဲ့ အမည်ပညတ်က ထည့်မတွက်လည်းရတယ်၊ အရင်းနဲ့အဖြားကို အဓိကထား ရမယ်။
ဒကာကြီးက ဗေဒင်ဆရာဆိုတော့ ဆရာကို ဆရာပြန်လုပ်မယ်လို့ မထင်လိုက်နဲ့ဦးနော်၊ ဘုန်းကြီးက စေတနာနဲ့ ပြောပြတာပါ။
တကယ်လို့ မိဘကပေးထားတဲ့ နာမည်ကို လောလောဆယ်မပြောင်းချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်ချိန်ကြရန် ဒကာကြီးစာရေးဆရာလိုင်းထဲကို အလိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်၊ အဲဒီအခါကျရင် ဒကာကြီး ဒီ''မြတ်ထွဋ်ခေါင်'' ဆိုတဲ့အမည်ကို သုံးပါလို့ ဘုန်းကြီးက တိုက်တွန်းချင်တယ်။ ဒါပါပဲ ဒကာကြီး ဘုန်းကြီးကြွမယ်''
ဘုန်းကြီးသည်ပြောပြောဆိုဆို ရုတ်တရက်ထကာကျွန်ုပ်၏ ဆိုင်ထဲမှ ကြွသွားပါသည်။ ဘုန်းကြီးကြွ သွားလို့ အတော်လေးကြာတော့မှ ကျွန်ုပ်သည် ဘုန်းကြီး၏ ဘွဲ့အမည်နှင့် နေရပ်လိပ်စာကို မေးဖို့သတိရ လာတော့သည်။ ၄င်းဘုန်းကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည် တစ်ခါမျှမမြင်ဖူး မကြုံဖူးပါ သိလည်းမသိပါ။ ကျွန်ုပ်အား အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ တိုင်ပညာခန်းအားရုတ်တရက်ကြီး အသေးစိတ်လာ၍ရှင်းပြသွားသည်ကို ကျွန်ုပ်မှာအံ့သြ၍ မဆုံးဖြစ်နေသည်။
ကျွန်ုပ်သည် ဈေးထိပ်သို့ အပြေးအလွှားထွက်ကာ ခုနက ဘုန်းကြီးအားလိုက်၍ ရှာရာအစအနပင် မတွေ့ရတော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၄င်းအိမ်မက်နှင့် သည်မနက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တို့အား ကျွန်ုပ်၏ ဆရာသခင်အားပြောပြရာ ဆရာသည် ကျွန်ုပ်ပြောသမျှကို နားထောင်ပြီးမှ ပြုံး၍
''မောင်ထွဋ် မင်းဟာ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ စာရေးဆရာ၊ ဗေဒင်ဆရာ တစ်ဦးဖြစ်လာလိမ့်လို'' လို့နိမိတ်ဖတ်၍ ပြောကြားပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း ဆရာပြန်သွားသောအခါ ညက အိမ်မက်ထဲမှ အဘိုးကြီးနှင့် ယခုမနက်ကြွလာသော ရဟန်းတစ်ပါးအကြောင်းကို ဆက်လက်၍ တွေးနေမိပါ တော့သည်။
(၁၉၉၈)ခု၊ မတ်လ (၇)ရက်၊ စနေနေ့။ အချိန်က မနက်(၁၀)နာရီခွဲ၊ အပြင်မှ နေကတအားပူနေတဲ့ အချိန်၊
ကျွန်ုပ်သည် တပည့်ကျော် ကိုအောင်ဝင်းနှင့် ယတြာကိစ္စများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေခိုက် ….
''ဆရာရေ ….. ဆရာ''
အိမ်ထဲသို့ ရေကြီးသုတ်ပြာနှင် ၀င်လာသူမှာ ကျွန်ုပ်၏ တပည့်တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုအောင်မြတ်စိုးပင် ဖြစ်ပါသည်။
''ဟာ ကိုအောင်မြတ်စိုးကြီး ပါလား ၊ လာဗျာ၊ ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ ''
''ဆရာရေ ….. ဆရာကို အင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့ အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြချင်လို့ ဒီနေ့အလုပ်ကို မနက်ပိုင်းထဲက ပြိးအောင်လုပ်ပြီး ဆရာ့ဆီကိုထွက်လာတာ''
ကိုအောင်မြတ်စိုးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ၊ ခင်ဗျား လာလို့ရှိရင် ထူးဆန်းတာတစ်ခုအမြဲပါလာ တာပဲ၊
''ဒီတစ်ခါ တကယ်ထူးဆန်းတာပါ ကိုအောင်ဝင်းရဲ့၊ ညက ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်တာ အိမ်မက်ထဲမှာ ဆရာဆုံးသွားလို့တဲ့''
ဆရာတို့အိမ်ရှေ့မှာလည်း အသုဘအလောင်းကြီးပြင်ထားလိုက်တာ လူတွေကလည်းအများကြီးပဲ၊ ဆရာ့မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေကလည်း ဆရာ့အလောင်းဘေးမှာ ငိုနေလိုက်ကြတာ၊ ကျွန်တော်လညး အိမ်မက်က လန့်နိုးလာတော့ ရင်တွေတအားတုန်တာနဲ့ ရေတစ်ခွက်ထသောက်ပြီး နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက်(၅)နာရီ လောက်ရှိနေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း ပြန်အိပ်လို့မရတာနဲ့ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက် သန့်ရှင်းရေး လုပ် ဘုရားရှိခိုးပြီး ဆရာ့အတွက် ဆုတောင်းပေးတဲ့ ကိစ္စတွေပဲ လုပ်လိုက်မိတယ်။
မနက်ရောက်တော့ ကျွန်တော့် မိန်းမကို ပြောပြလိုက်တယ်။ သူလည်း ကျွန်တော့် အိမ်မက်ကို နားထောင်ပြီး ဆရာ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်။
ကျွန်တော့်အလုပ်က ပန်းထိမ်ဆရာဆိုတော့ လုပ်လက်စလေးတွေ နည်းနည်းအစသတ်ပြီး ဆရာ့ဆီကို ထွက်လာတာ။
ကျွန်ုပ်သည် ကိုအောင်မြတ်စိုး၏ အိမ်မက်ကို နားထောင်ရင်းမှ လက်မှနာရီကိုကြည့်လိုက်ရာ မနက် (၁၁)နာရီကျော်နေပြီ …..
၀ (စနေနေ့) ၁ (တနင်္ဂနွေချိန်)
၆ ခရီး၊ စကား(ခိုက်) ၀ (စနေသား) ခိုက်
စနေနေ့ (နေ့တိုင်)တွင် ခရီး၊ စကားနှင့် လှုပ်ရှားမှုများသည် တိုင်၏ အဆိုးဆုံးဌာနတွင် ရပ်တည်နေ ပြီး၊ အချိန်တိုင် (သူရဇ္ဇ)တိုင်တွင် ကျွန်ုပ်၏မွေးနေ့ (စနေ)မှာ တိုင်၏ အဆိုးဆုံးဌာနတွင် ရပ်တည်နေပြန်ပါ သည်။
အချိန်းတိုင်းအရ စနေသားပျက်စီးကြုံနေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏တပည့်သည်သူ၏အိမ်မက်ထဲတွင် ကျွန်ုပ် သေပြီဖြစ်ကြောင်းလာ၍ ပြောနေပြန်သည်။သဘာဝတရား၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောကို ပြန်လေ့လာလျှင် (ည) အချိန်ကုန်ဆုံးပါက (နေ့)အချိန်ကျရောက်လာမှာဖြစ်ပါသည်။ ပျက်စီးမှုအကြောင်းတရားကို ကြားလိုက်ရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပျက်စီးမှုတို့ ကုန်ဆုံးလျှင် ကောင်းသောအကျိုးတို့ကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂( ကောင်းကျိုးချမ်းသာ) ၂ (ငွေကြေး)
၀ (ပျက်စီးမှု) ၀ (စနေသား)
''ကဲ ကိုအောင်မြတ်စိုးရေ၊ ခင်ဗျားမက်တဲ့ အိမ်မက်က ကျွန်တော့်အတွက် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ရမယ့် (နိမိတ်)ကိုပြတာပဲ (၅)ရက်အတွင်း ငွေကြေးဝင်လာလိမ့်မယ်''
''ဟာ … ဆရာထွဋ်၊ အဲဒီအိမ်မက်နိမိတ်က ငွေဝင်မယ့်နိမိတ်ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်က အဆိုးနိမိတ် ထင်နေတာ၊ ဟဲ…ဟဲ ဒါပဲနော် ဆရာ၊ ငွေဝင်လာရင် ကျွန်တော်တို့ကို လက်ဖက်ရည်တိုက်ရမယ်''
''သြော် ကိုအောင်မြတ်စိုးရယ် လက်ဖက်ရည်တင်မကဘူး မုန့်ပါကျွေးဦးမယ်''
ကျွန်ုပ်သည် ၄င်းအိမ်မက်ကိစ္စဖြစ်ပေါ်ပြီး (၅)ရက်အကြာတွင် မော်လမြိုင်မှ ကျွန်ုပ်၏တပည့်တစ်ဦး သည် ၄င်း၏လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်မှုရရှိသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်ထံသို့ ငွေငါးသောင်းလာရောက်ကန်တော့ သွားပါသည်။ အိမ်မက်နှင့် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဆက်စပ်မှုတို့သည် အံ့သြစရာကောင်းလေစွာ။
(၂၀၀၆)ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၊ အချိန်က မနက်(၄)နာရီ၊ နေ့ကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ မှတ်မိတာကတော့ ထို နေ့တွင် မိုးကြီးလေးကြီးကျတာတော့ သေချာသည်။
အိမ်မက်က မနက်မိုးလင်းခါနီး အိမ်မက်ဖြစ်လို့ ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ အိမ်မက်ထဲကအဖြစ်အပျက်တို့ကို တစ်ခုမကျန် မှတ်မိနေပါသည်။
အိမ်မက်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်နှင့်မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်သော ကျွန်ုပ်၏ ဆရာသခင်တစ်ဦးဖြစ်သူ အဘ ဦးဘမှီ နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။ အဘ ဦးဘမှီသည် မဟာဘုတ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ အိမ်မက်ထဲတွင် အဘသည် ကျွန်ုပ်၏နံဘေးတွင် တင်ပလ္လင်တွေ ထိုင်နေသည်။
အဘက ''မောင်ထွဋ် မင်းဆီကို ငါရုတ်တရက် ရောက်လာလို့ မင်းအံ့သြနေတယ်မဟုတ်လား၊ မင်း အခက်အခဲ တွေကြုံနေလို့ ငါ့ရောက်လာရတာပဲ မင်းလက်ဖက်ရည်မှာလူမ၀င်ဘူးမဟုတ်လား၊ (ကသစ်)ရွက် နဲ့ ဓာတ်ဆင်လိုက်ကွာ၊ ဒီနည်းကို မင်းသိတာပဲ နောက်ပြီး မင်းဓာတ်ဆင်ထားတဲ့ မတွန့်စေရကစားကွက်တွေ ကို ဆန်ဆေးရည်နဲ့ လောင်းပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တာ။ ဒါဆိုရင် မင်းဆိုင်ကို လူပြန်ဝင်လိမ့်မယ်''
''ဗျာ ….. ''
အိမ်မက်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်သည် လွန်စွာအံ့သြသွားပါသည်။ ဆိုင်ကို လူမ၀င်တာကို သိတယ်ဆိုတာက သိပ်မထူးဆန်းဘူး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စုံစမ်းလိုက်ရင်ရတာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တည်းသာသိသော (မတွန့်စေရ) ဓာတ်ဆင်ထားည်ကို အဘဦးဘမှီ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သိတာလဲ၊ ဆရာ ဦးဘမှီ ဓာတ်ဆင်လိုသော ကသစ်နှင့် လူဝင်စေလိုသော ပညာခန်းမှာ (လူ)ဆိုသော ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်၏ မိတ်နှင့်ဓာတ်ကို တွဲ၍ ဓာတ်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(၄)ဟူး၏ မိတ်ဂြိုလ်မှာ တနင်္လာဖြစ်ပြီး ၊ (၄)ဟူး၏ ဓာတ်ဂြိုလ်မှာ သောကြာဖြစ်သောကြောင့်၊ (၄)ဟူး ၏ မိတ်နှစ်ဖက်မှာ တနင်္လာအစ သောကြာအဆုံးနံများဖြစ်ကြသော ကသစ်၊ ကွမ်းသီး၊ ကျွန်းသား တို့ဖြစ်ပါ သည်။
(၄) = ( ၂ x ၆)
နောက်တစ်ရက်တွင် ကျွန်ုပ်သည် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်န၀င်းပေါ်ချိန်ဖြစ်သော (စနေချိန်)တွင် မိတ်ပေါ်ဓာတ်အုပ် ပညာခန်းဖြစ်သော ကသစ်နှင့်ဓာတ်ဆင်ပြီး မတွန့်စေရဓာတ်များကို ဓာတ်ခိုက်ဖြေစနစ်ဖြင့် ဆန်ဆေးရည်များ လောင်းလိုက်ရာ အံ့သြဖွယ်ရာ ကျွန်ုပ်၏လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ လူပြန်ဝင်ပါသည်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျဖြစ်နေတာက အဘဦးဘမှီနှင့် မတွေ့တာ (၅)နှစ်လောက်ရှိပါပြီ၊ စွဲလမ်းမှုလည်းမရှိခဲ့ပါ။ နောက်တစ်ခုက အဘသည် ဗေဒင်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အကြားအမြင်ရ ပုဂ္ဂိုလမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ရိုးသားစွာ ၀န်ခံပါရစေ၊ ကျွန်ုပ်၏ဘ၀တွင် အလွန်ထူးဆန်းသော အိမ်မက်များစွာမက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် ယခုဟောကြားနေ သော ဗေဒင်ပညာသည် ကျွန်ုပ်၏ဆရာသခင် ကျေးဇူးရှင်တို့၏ အနီးကပ်သင်ကြားပြသမှုကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အကြောင်းကြီးငယ် ပေါ်ပေါက်လာ၍ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါတွင် အိမ်မက်တွင်း မှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ လာရောက်ဖြေရှင်းပေးကြရာ ကျွန်ုပ်၏ အခက်အခဲများစွာ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။
ရေးသားသူ Myat Htut Khaung at 1/31/2018 02:13:00 PM